Iindaba -Ingxowa yokupakisha ye-hypochlorous acid
Ukuphenjelelwa ngu I-COVID-19, kukho imfuno eyandayo yeemveliso zokulwa neentsholongwane ezifana nezibulala-ntsholongwane kunye notywala.
Ukusukela ekuqaleni konyaka we-2020, ooomatshini bakho are ukusebenza iiyure ezingama-24 rhoqo usuku lwe Intengiso ye hypochlorous acid disinfectant kunye notywala.
Sithumela ngaphezulu kweengxowa zeepcs ezingama-100000 ngeetephu (ngenyanga) kwimarike yaseJapan ukusukela ngonyaka we-2020. Esona sakhono sithandwayo ziilitha ezi-5 neelitha ezingama-20 kulwelo lwe hypochlorous acid disinfectant kunye notywala. Sihlala sithumela kwi-KIX ngomoya, okanye sithumele ngolwandle kwizibuko lase-Osaka, izibuko le-NAGOYA kunye neTOKYO Port.
Ngaphandle kwebhegi yethu ebhokisini (i-cheertainer kunye ne-ldpe cubitainer), singathanda ukwazisa zonke iimveliso zethu zokupakisha:
1. Uchungechunge lwe-SJA - Ingxowa yaseCubitainer ebhokisini, Ldpe izinto zeplastiki ezithambileyo, ukusonga, akukho sibambo sokuphatha. Ubungakanani obuqhelekileyo be-1L-25L.
2.I-SJB Series- Isikhongozeli samanzi esigaxwayo, izinto ze-Ldpe, i-BPA yasimahla, ukusetyenziswa kwangaphandle ikakhulu, nesiphatho sokuphatha. Ubungakanani obuqhelekileyo be-5L, 10L kunye no-20L.
3.I-SJC Series -Semi enamavili amajeli anakho, izinto ze-Ldpe, iplastiki ethambileyo, ephathekayo, ehlala ixesha elide, ukusetyenziswa kwangaphandle, ngesiphatho sokuphatha. Singoyena mthengisi mkhulu we-UNHCR kolu hlobo lwemveliso. Ubungakanani obuqhelekileyo be-10L kunye ne-20L.
4. Isikhwama sokumela esime nkqo ebhokisini, esenziwe yi-PA + PE-maleko-maxabiso, atshiphu kune-ldpe cubitainer, isatifikethi se-EU, ukukhanya, ukugcina indawo yokugcina, ukunciphisa iifizi zokuhambisa, uyilo olutsha olunemingxunya ebhegini nganye, imilo yecube ifanela ibhokisi ngokugqibeleleyo , zomelele ngokwaneleyo, zinezinto ezahlukeneyo zokufakelwa / izixhobo. Ubungakanani obuqhelekileyo be-5L, 10L, 18L, 20L.
Singumzi-mveliso onamava okwenza iminyaka eli-10. Sithengise olu hlobo lweebhegi eAlibaba kangangeminyaka eli-9. Umthengi 'Isidingo kunye neengcebiso ngamandla ethu okuqhuba, ukwaneliseka kwabathengi yeyethu ukulandela. Singo ngoku ujonge phambili kwi intsebenziswano enkulu kunye nabathengi aphesheya ngokusekelwe izibonelelo macala.
Siyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba abantu behlabathi baya koyisa i-COVID-19 kungekudala.